नेता–कार्यकर्ताको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउने खालका प्रावधान समेटेर नियमावली ल्याइएको भन्दै कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले विरोध जनाएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने भएका छन् । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन २०७७ सालको फागुनसम्ममा गर्नेगरी उनले एक वर्षको कार्यकाल बढाउन खोजेका हुन् ।
कांग्रेसमा पनि लेबी
कांग्रेसले लेबी (तोकिएको सहयोग) नबुझाउने सदस्यलाई पार्टी र संसदीय निर्वाचनको कुनै पनि तहमा चुनाव लड्न नपाउने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्न लागेको छ । देशभर पार्टी संगठनलाई चलायमन बनाउन कांग्रेसले लेबीलाई संस्थागत गर्न खोजेको हो । यसअघि मन्त्री र सांसदलाई मात्र लेबी तोकिएको थियो ।
महाधिवेशन विवाद झनै चर्कियो
कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवाद चर्किंदै गएको छ । महाधिवेशन तालिका सार्वजनिक गर्ने विषयमा विवाद भएपछि आइतबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पाँच घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो ।महाधिवेशनको एजेन्डामा छलफलै नगर्ने सभापति देउवाको अडान र महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेर अघि बढ्नुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको अडानका कारण बैठक ढिलो भएको हो ।
सत्तारूढ सांसदको प्रश्न– सरकार भारतसामु झुकेकै हो ?
भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण रोकेर सरकार भारतीय सरकारसामु झुकेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् । पार्टी संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा उनीहरूले ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको सरकारबाटै यस्तो निर्णय आउनु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले नियमित महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सामूहिक दबाब दिने रणनीति बनाएको छ । केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन शनिबार महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा बसेको संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुको बैठकले यस्तो रणनीति बनाएको हो ।
दुई पार्टी एकीकरणक्रममा नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष किन राखियो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए, ‘जेटमा दुई पाइलट हुन्छन् । दुई पाइलट भएको जेट डुब्दैन ।’ ओलीले भनेजस्तै एकीकरणको १३ महिनापछि जहाजले उल्टो दिशा समातेको छ ।
सूचना–प्रविधि विधेयक : उपसमितिले बढायो दण्ड–जरिवाना, विधेयकमा के छ ?
सूचना प्रविधि विधेयकका प्रावधानमा प्रश्न उठिरहेका बेला संसदीय उपसमितिले अझै कठोर दण्ड, सजाय र जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सांसदले राखेको संशोधनबारे अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले दण्ड, सजाय र जरिवाना बढाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
एउटै मञ्चमा ओली र दाहालबीच घोचपेच
पार्टी एकता हुँदाको सम्झौता कार्यान्वयनका सवालमा आपसी तिक्तता बढिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्ष शनिबार राजधानीमा एउटै सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भए । कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मञ्चमा पुगिसकेका थिए । त्यसको १५ मिनेटपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइपुगे ।
कांग्रेस संघीय ढाँचाअनुसार वडादेखि प्रदेशसम्मको पार्टी संरचना गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । अधिवेशन नहुञ्जेल अन्तरिम अवधिका लागि वडा, क्षेत्र, गाउँ, नगर र प्रदेश संरचना बनाउन लागिएको हो । नयाँ संरचनामा पदाधिकारी अधिवेशनबाट छान्ने कि मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरूबीच विवाद कायमै छ ।